Phola kwifama yethu, ngokutya okufreshi - I-Airbnb
Phola kwifama yethu, ngokutya okufreshi
Ifama sinombuki zindwendwe onguSajith
Isuka kweli khaya lincinci apho saqala khona ukwakha ifama yethu yezinto eziphilayo kwiminyaka engama-20 eyadlulayo. Ijikelezwe ngokupheleleyo buhlaza, le ndlu yasefama isandula ukulungiswa ikusondeza kwindalo kwaye ikuncede uhlaziyeke.
Ifanelekile izibini, iintsapho ezincinci, okanye iqela labahlobo-indlu encinci yabucala njengeyakho inokutya okuphekwe ekhaya okubonelelwa imini yonke
**Isidlo sakusasa sifakiwe
*Eli khaya lisecaleni kwekhaya lethu elitsha losapho, elikwadweliswe kwi-AirBnB. www.airbnb.com/rooms/590707
Yonwabela ukuhlala kwindawo etofotofo nepholileyo kule ndlu intle, engqongwe yindalo. Izinto ezininzi eziluhlaza kuyo yonke indawo. Le ndlu isandul 'ukulungiswa (ngoAprili 2019). Akukho Aircon kwigumbi lokulala (kukho izinto eziluhlaza ezijikelezileyo kunye nepalakadan, mhlawumbi awuzukuyidinga)
Eyona ndawo yokuhlala isemagqabini, njengeendwendwe ezisityeleleyo, kukutya okuphekwe ngumama wam kunye nomama wam kunye nezinto ezininzi ezisuka kwifama yethu.
Isidlo sakusasa siqukiwe kwixabiso. Ezinye izidlo zibhataliswa i-Rs.250 umntu ngamnye kwisidlo ngasinye. Zonke izidlo ngabantu abangayityiyo inyama, zilungiselelwe ngezinto ezininzi eziphilayo. Ukutya kuza kulungiselelwa kuze kunikwe ikhaya lethu elikwindawo ekufutshane. Kukho ikhitshi kule ndawo owamkelekileyo ukuba ulisebenzise, ukuba ungathanda ukupheka into yakho, nangona sicebisa ukuba uphumle nje uze usihoye.
Indlu inendawo yokupaka eyaneleyo. Kukho nendawo egcinwe kakuhle ngasemva kwendlu eyongeza ekuthembekeni kwale fama.
Kufuphi nesikhululo seenqwelo-moya [Coimbatore, Kochi], isikhululo sikaloliwe [Palghat Junction] kunye ne-State Highway 544 [NP 47] kwenza le ndawo ibe yindawo efanelekileyo yokubuka iKerala - ilizwe lika Thixo. I-Palakkad yindawo efanelekileyo yokubuka iKerala njengoko iphakathi kwaye idibene neNorth and South Kerala ngokusebenzisa iState Highways (Motorways).
IMaplampuzha Dam neGadi entle, inqaba yeTippu Kaen isePalakkad, ekwiimayile eziyi-10 ukusuka ekhayeni lam.
Jonga iwebhusayithi ye-TourPalakkad ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi.
Ikhaya lethu lisePudussery, malunga ne-10km ukusuka kwidolophu yasePalakkad. Ikufuphi nefama yethu yendalo, kwaye eyona ndawo ikufutshane yokudibana/idolophu yiPudussery emalunga ne-2km. Uninzi lweendwendwe zethu ezize ekhaya ziye zarhoxisa izicwangciso zazo zokundwendwela ezinye iindawo kwaye zakhetha ukuphumla nje ekhayeni lethu, ukuhambahamba kwifama yendalo kwaye sonwabele ukutya okuphekwe ekhaya.
Umbuki zindwendwe ngu- Sajith
Sifuna iindwendwe zethu zibe namava amnandi, ke nceda uzive ukhululekile ukubuza nantoni na enokwenza ukuhlala kwakho kube mnandi ngakumbi. Siza kuzama konke okusemandleni ethu ukulungiselela.